Johansson mamaky ny lanitra sy ny tany amin'ity sary vaovao | Famoronana an-tserasera
Erik Johansson dia manana nandany imbetsaka tao amin'ny bilaogy ary izy dia iray amin'ireo mpaka sary tsy azo antoka izay mitady ny hevitra hisy fiantraikany amin'ny tontolo iainana mba hamela antsika ho talanjona amin'ny zavatra rehetra ao an-tsainy sy ny fahaizany mamorona azy ao anaty andian-tsarimihetsika epic izay hitety an'izao tontolo izao, toa azy ireo ihany koa. ataovy manaraka ireto andalana ireto.
Io indray no ananantsika fotoana hanehoana ny asany vaovao sy ny tetikasany izay misy fitaratra ho «borosy». Ary tsy vitsy izy ireo, fa 17 metatra toradroa no fanitarana amin'ireo fitaratra rehetra apetranao amin'ny fomba mety mba hanomezana fomba fijery hafa na hijerena mialoha ny sarinao.
Ity no asa farany nitranga manaraka ireto andalana avy any Johansson ireto. Ny fombany tsy hay hadinoina ananany amin'ny maha iraka lehibe an-tsika ny saintsika alohan'ny zavatra hitany mitady an'io hafahafa tsy azo ovaina eo amin'ny tarehintsika io rehefa mijery ilay sangan'asa kanto vaovao miendrika sary hafahafa sy mamorona be izahay.
Un tompon'andraikitra amin'ny fanodinkodinana zavakanto Ary tamin'ity indray mitoraka ity dia nandany volana maro vao namorona sy nampiasa fitaratra mihoatra ny 17 metatra toradroa. Ny sary dia mampiasa ny tena vokany sy ny fanovana sary mba hamokarana izany valiny farany izany izay toa mizara roa izao tontolo izao avy eo amin'ny farany ambony ka hatrany amin'ny lanitra sy ety an-tany.
Tao amin'ny tetikasany farany dia nanapa-kevitra i Erik fakana sary ny seho an-tsary hanomezana ny fijerinao manokana sy ny fahitanao ny traikefanao kanto. Araka ny nambarany dia nieritreritra izy fa mahafinaritra ny mizara ny fizotrany sy mampiseho ny maha-zava-dehibe ny asa ao ambadiky ny sanganasa tsirairay.
Manana ny horonantsary eto ianao mba tsy hahasadaikatra anao ny fitiavan'ity mpanakanto ity amin'ny fanodikodinana sary izay azo antoka fa hamela antsika ho gaga indray amin'ny tetikasany manaraka izay hitondranay ireto andalana ireto.
Ianao dia manana ny tranonkalanao, ny facebook-nao y ny instagram.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Fitaratra 17 metatra toradroa ho an'ity sary ity izay mamaky roa ny lanitra sy ny tany